Tonga ny iPhone 6S sy 6Plus, ireto ny vaovao | Vaovao IPhone
Tonga ihany izy ireo, nanolotra ny sainam-panahin'i Apple, ny iPhone 6S ary ny iPhone 6 Plus tonga miaraka amina vaovao i Tim Cook. Ao amin'ny Actualidad iPad dia holazainay aminao ny vaovao rehetra an'ny smartphone Apple mba tsy hanadino antsipiriany tanteraka momba izay naseho tamin'ny Keynote androany ianao, hahafahanao manapa-kevitra samirery raha mendrika na tsia ireo iPhones vaovao. Ny daty fanombohana, ny vidiny, ny 3D Touch, ny fakan-tsary vaovao ary maro hafa no horesahintsika ato amin'ity lahatsoratra ity, koa raha te hahalala tanteraka ny zava-drehetra ianao dia aza hadino izany. Ireo no vaovao momba ireo maodely iPhone vaovao.
1 Exterior sy loko
2 Mpikirakira A9 vaovao miaraka amin'ny M9 sy Touch ID mifangaro
3 Fanatsarana ny fakan-tsary sy sary mivantana
5 3D Kitiho ny iPhone ForceTouch
6 iOS 9, ilay kinova antenaintsika rehetra
7 Vidiny sy fandefasana
Exterior sy loko
Voalohany indrindra dia nanome toky i Apple fa hamongotra ny "bendgate" noho ny fananganana azy ao Aluminium 7000 Series izay mampanantena fiakarana hatramin'ny 40% amin'ny hamafin'ny fitaovana nefa tsy mampiakatra ny lanjany. Etsy ankilany, nitatitra ihany koa izy ireo fa nampitombo ny hamafin'ny fitaratra voalohany, na dia toy ny mahazatra aza dia mbola tsy mitatitra ny mpamatsy azy ireo, izay heverina fa Gorilla Glass.
Apple dia nitahiry ny gamut miloko teo aloha, fa tamin'ity indray mitoraka ity dia nitondra fanampim-baovao, ny iPhone volamena volamena. Betsaka ny siosion-dresaka tato anatin'izay roa volana izay momba ny lokon'ny iPhone vaovao, toa nanjakazaka tokoa ny lamaody ary nanapa-kevitra i Apple fa hanampy ity faritra vaovao ity amin'ny paleta nataony. Noho izany, rehefa atolotra indray mandeha, dia hitantsika amin'ny loko ny iPhone Volafotsy, Volondavenona volondavenona, volamena ary Rose volamena.
Mpikirakira A9 vaovao miaraka amin'ny M9 sy Touch ID mifangaro
Ny mpikirakira araka ny nandrasana dia novaina ho puce A9 64-bit, tamin'ity indray mitoraka ity miaraka amin'ny zava-baovao misy ny M9 mpiara-miasa miaraka aminy izay mamonjy toerana sy lanja. Etsy ankilany, mampanantena izy io Fampisehoana ambony 70% amin'ny hafainganam-pandehan'ny processeur ary hatramin'ny 90% ambony noho ny GPU, tompon'andraikitra amin'ny sary ny fitaovana. Mampalahelo fa amin'ny resaka RAM dia tsy afaka nahazo vaovao izahay, saingy heverina fa nanapa-kevitra ny hampiakatra ny fahafaha-manana RAM an'ny iPhone 6S sy 6S Plus hatramin'ny 2GB i Apple raha toa ka azo atao izany. .
Ny kinova faharoa an'ny TouchID dia mampanantena hafainganam-pandeha famakiana indroa haingana kokoa noho ny TouchID teo aloha, tsy lazaina intsony fa nataon'izy ireo tonga lafatra ny rafitra ka mandaitra farafaharatsiny mahomby ny famakiana.
Fanatsarana ny fakan-tsary sy sary mivantana
Tamin'ny farany dia resin'ny ady megapixel i Apple, ny fakantsary lehibe an'ny iPhone 6S sy 6S Plus dia nitombo ho 12 MP miaraka amina sensor vaovao izay mampanantena ny hisambotra hazavana amin'ny fomba mahomby amin'ny toe-java-maivana kokoa, izay hamela antsika hankafy loko voajanahary sy mitombina kokoa. Mbola mijanona ihany ny tselatra misy feo roa, na izany aza, mpandresy mazava hafa amin'ity Keynote ity ny fakantsary FaceTime HD avy eo aloha izay misy 5 MP. Etsy ankilany, maodely tselatra vaovao no natolotra ho an'ny selfies amin'ny alàlan'ny efijery izay tsy mampanantena fa tena ilaina loatra fa afaka manala antsika amin'ny toerana tery.
Miampy ny fampiasa lozisialy vaovao Live Photos afaka manao hybrid ianao eo amin'ny zavatra efa lasa GIF sy horonan-tsary tamina fomba tsotra, ary koa mizara eo noho eo amin'ireo fitaovana iOS hafa.
Apple dia nandray ny fifandraisan'ny fitaovana vaovaony tamim-pahamatorana, miaraka amin'ny tsikera maro azony noho ny fifandraisana WiFi. Na izany aza, ny valintenin'i Apple dia ny fampidirana chip WiFi vaovao izay mampitombo ny fahafaha-manao sy hafainganam-pandeha ho avo roa heny noho ny ankehitriny, miaraka amina puce LTE Advance izay mampanantena ny hafainganam-pandeha 4G ambony indrindra sy ny mety hisian'ny fifandraisana amin'ireo tarika 23 samihafa.
3D Kitiho ny iPhone ForceTouch
Efa fantatray izany, fa ny fanamafisana tsy hita, Apple dia nanolotra ho zava-baovao fomba vaovao hifaneraserana amin'ny fitaovantsika, 3D Touch dia rafitra iray fakan-tsarimihetsika izay misaotra ireo mpitsikilo be pitsiny dia hahatsikaritra ny tsindry hanerenanay ny efijery. Manaova zavatra mifanaraka amin'izany. Azontsika atao ohatra manatanteraka hetsika manokana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny sary masina ny fampiharana amin'ny hery manokana, mizara sary, mamafa mailaka ary maro hafa. Mbola azo jerena ny fahafahan'ny 3D Touch, hiankina amin'ny fanohanana omen'ny mpandrindra fampiharana azy izany, fa ny sasany toa an'i Dropbox dia efa niseho sahady tamin'ny Keynote.
iOS 9, ilay kinova antenaintsika rehetra
Azontsika atao ny milaza kely na tsy misy momba ny iOS 9, izay havoaka amin'ny besinimaro amin'ny 18 septambra. Ny fampifanarahana dia hiparitaka amin'ireo maodely iPad manomboka amin'ny iPad 2 ka hatramin'ny ankehitriny indrindra, eo amin'ny sehatry ny iPhone, ny iOS 9 dia hiverina any amin'ny iPhone 4S handroso amin'ny iPhone 6S. Ny kinova vaovao an'ny iOS dia mampanantena fa ho mafy orina indrindra hatramin'ny iOS 6 ary izany no tadiavin'ny mpampiasa rehetra.
Any amin'ny firenena voafantina, ao anatin'izany i Frantsa, Alemana, Royaume-Uni, Aostralia ary Etazonia, ankoatry ny hafa dia afaka hitahiry ny iPhone isika manomboka ny 12 septambra ary hanomboka amin'ny 25 septambra ny fandefasana sy ny fivarotana azy.
Raha ny amin'ny vidin'ny firenena hafa dia tsy nahalala firy isika, any Alemana Hanomboka amin'ny 739 € ho an'ny modely fidirana amin'ny iPhone 6S sy € 839 ho an'ny maodely 6GB iPhone 16S Plus izy ireo. Any Frantsa, etsy ankilany, ny iPhone 6S dia aseho amin'ny € 749 ary ny iPhone 6S miampy amin'ny € 849 amin'ny kinova mora indrindra. Any amin'ny Fanjakana Mitambatra amin'ny lafiny iray dia ho hitantsika amin'ny 539 pounds ho an'ny maodely 6Gb iPhone 16S ary 619 pounds ho an'ny iPhone 6S Plus.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Tonga ny iPhone 6S sy 6S Plus, ireo no vaovao
Ireo iPhone 6s vaovao no ho tokana misy amin'ny volamena
IOS 9 Daty famoahana ofisialy